याद नगर्नुहोस्! Semalt विशेषज्ञ सेयर एसईओ प्रमाण को7प्रकार
SEO अभ्यास अझै जवान र बढ्दो छ। समर्थकहरूले यस दृष्टिकोणलाई फ्रन्ट गरेका छन् कि एसईओ एक विज्ञान हो जुन बहसको परिणामस्वरूप सबै अवस्थामा एसईओ दृष्टिकोणले उत्तम काम गर्दछ। त्यहाँ SEO को आकार र फारमसँग धेरै प्राविधिक प्रमाणहरू छन्।
यदि SEO एक विज्ञान हो भने, विज्ञानले कसरी व्यवहार गर्छ? विज्ञानले मौलिक धारणामा निर्भर गर्दछ कि ब्रह्माण्डले क्रमबद्ध नियमहरू पालन गर्दछ जुन कुनै परिकल्पना परीक्षण गर्नु अघि अवलोकन र प्रयोगद्वारा निर्धारित गर्न सकिन्छ। यो पनि मानिन्छ कि यी नियमहरु स्थिर बिस्तारै मात्र बिस्तार बिस्तार बदल्दै छन् जहाँ पनि कठोर प्रतिमान शिफ्टहरु छन्। एसईओ को संसार संरचित र व्यवस्थित छ तर SEO को लागी नियम वा एल्गोरिदम लगभग दैनिक आधारमा परिवर्तन हुन्छ। यहाँ अवलोकनमा भर पर्न को लागी कुनै पनि प्रयासले पूर्ण नतिजा प्राप्त नगरेसम्म सही परिणाम प्रदान गर्दैन।
Semalt को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक निक Chaykovskiy, एसईओ परिपक्व विज्ञान बनाउन मा7प्रकारको एसईओ प्रमाणहरु र आफ्नो उपयोगिता को लागी अनुसन्धान गर्दछ:
१. भविष्यसूचक प्रमाण
यो विशेषज्ञहरूबाट आउँछ जसले एसईओ द्वारा निर्भर एल्गोरिदम वा कोड लेख्छन्। तिनीहरूको इनपुट यो वास्तविक रूपमा अद्वितीय छ, र तिनीहरू बाइबलीय भविष्यवक्ताहरू जस्तै एसईओ पर्वतको माथि बस्दछन्। तसर्थ, हामीसँग उनीहरूको सही बयानहरू मिलाउन सामर्थ्य हुनुपर्दछ किनकि हामी SEO कोड आफै परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। तल्लो अन्तमा, भविष्यसूचक प्रमाणहरूमा निहित रुचिहरू हुँदैनन् र कहिलेकाँही गुप्त पनि लाग्न सक्छ।
२. घटनाको प्रमाण
यो व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता अनुभव को प्रमाण हो। सबै विज्ञानहरू अवलोकनको साथ सुरू हुन्छन् र एसईओले वेबसाइटहरूमा परिवर्तन परिवर्तन गर्दछ र स्तर निर्धारणमा प्रभावको विश्लेषण गर्दछ। यो प्रमाण प्रचुर मात्रामा उपस्थित छ र त्यसैले SEO मा कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि सुरूवात बिन्दुको रूपमा संकलन गर्न सजिलो छ। यद्यपि फ्लिप पक्षमा, प्रयोगकर्ता अनुभवहरू एक व्यक्तिबाट अर्कोमा पक्षपाती हुनसक्दछ त्यसैले एक अनुभवले सम्पूर्ण कथा भन्न सक्दैन।
Wild. जंगली प्रयोग
सबै विज्ञानहरू प्रयोगात्मक छन्। एसईओमा, हामी एक कल्पित अवधारणाका लागि छौं कि "शीर्षक ट्यागमा कुञ्जी शब्द थप्नाले रँकि improve सुधार गर्दछ", वेबसाइटहरूमा परिकल्पना परीक्षण गर्न परिवर्तन गर्दछन् र नतिजा मापन गर्दछौं। एक परिकल्पना गठन र परीक्षण यस प्रकार प्रक्रिया मान्यीकरण कारकहरूको causality निर्धारित गर्दछ। अवस्थित SEO पूर्वाधारमा सम्झौता गर्नबाट जोगिन प्रयोगलाई अझै नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
Control. नियन्त्रण प्रयोग
यस सेटअपमा, धेरै डोमेन नाम पंजीकृत छन् र नयाँ वेबसाइटहरू ग्राउन्ड अपबाट निर्माण गरियो। वैकल्पिक रूपमा, साइटहरू एक निश्चित बिन्दुमा निर्मित छन् जस पछि प्रत्येक व्यक्तिगत साइटले आफ्नै परिवर्तनहरू परिचय गराउँछ। यस दृष्टिकोणले अन्य कार्यहरूमा सम्झौता नगरी प्रयोगहरूको नियन्त्रणको ग्यारेन्टी दिन्छ। जे होस्, यस वातावरणमा सिर्जना गरिएका साइटहरूले वास्तविक SEO वातावरणको जटिलता वा वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन।
Second. दोस्रो हात प्रमाण
यो श्रवणार्थी जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकतामा, सबै अनुभवहरू र प्रयोगहरू प्रमाणको वैध स्रोतहरूको लागि विगतमा गरिएको थियो। SEO मा केही तथ्यहरू प्रत्येक पटक प्रयोगहरू दोहोरेर पुष्टि हुन आवश्यक पर्दैन। यस्तो अवस्थामा, प्रमाणले वैज्ञानिक प्रगतिको भरपर्दो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दछ।
Cor. आपसी सम्बन्ध
ठूला डाटा सेटहरूमा, चरहरू वा प्रयोगहरू अलग गर्न गाह्रो हुन्छ। स्थिरमा, तपाइँ डाटा सेटहरू बीच सहसंबंधहरू हेर्नुहुन्छ। यसले गणितीय सम्बन्धहरूलाई अनावरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, खास गरी जहाँ बहु-चरहरू उही परिणामलाई प्रभाव पार्दछन्। जे होस्, सहसंबंध कारणको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन
Lar. ठूलो स्केल सिमुलेशन
एक एसईओ ब्रह्माण्डको मोडेलहरू ठूलो मापनमा परिकल्पना परीक्षण गर्न सिर्जना गरियो। यी मोडेलहरूको परीक्षणले अन्तरदृष्टिपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दछ जसले मोडेलको सुधारतर्फ डो .्याउँछ। यहाँ नियन्त्रण प्राप्त गर्न सम्भव छ किनकि यो प्रकारको प्रयोगशाला SEOको प्रकार हो। अझै, सिमुलेसनमा परिणामहरू प्रयोगमा रहेको मोडेलको रूपमा मात्र राम्रो छन्।